Taariikhda - Goldenlaser
Waxaan nahay shuraako macaamiisheena laga bilaabo xiriirka ugu horeeya ilaa adeegga iibka kadib. Maaddaama aan nahay lataliye farsamo, waxaan macaamiishayada kala hadleyna shuruudaha waxaanna soo saareynaa xalal kordhinaya waxtarka iyo qiimaha lagu daray. Dhamaan - silsiladda geeddi-socodka shahaadeysan ee ISO 9001 - waxaan bixinaa xirmada xalka ugu soo jiidashada badan.
Marwalba wadada ayaan ku jirnaa.
MES nidaamka aqoon isweydaarsiga caqliga leh
Nidaamka aragtida caqliga leh ee leh nidaamka leysarka madaxa-madax-bannaan ee laba-madax leh ee ay bilawday GOLDEN LASER ayaa si rasmi ah loo bilaabay, oo si guul leh loogu dabaqay qaybta jarista maqaarka ee kabaha.
GOLDEN LASER waxay soo bandhigtay qorshaha istiraatiijiyadeed ee "HALDAN HALDAN: Madal + Circle Ecological" si loo dardar geliyo dhismaha mashiinka leysarka dhamaadka-sare leh iyo 3D - "GOLDEN +".
GOLDEN LASER waxaa si rasmi ah looga aasaasay Iibka iyo Xarunta Adeegyada Mareykanka iyo Vietnam.
Shirkadda GOLDEN LASER waxay iskaashi la samaysay Jaamacadda Wuhan Textile University si loo sameeyo shaybaar lagu dalbo leysarka.
Qaab dhismeedka hay'ad ee shirkadda si weyn ayaa loo saxay. Dhowr shirkado hoosaadyo iyo qaybo ayaa la aasaasay.
Nidaamka goynta leysku aragtida duulida ee loo sameeyay warshadaha dharka isboortiga ee dheeha-sublimation ayaa si guul leh loo bilaabay.
Bishii Meey 2011, LASERKA DAHABKA ah waxaa si rasmi ah loogu qoray Suuqa Kobcinta Ganacsiga ee Shenzhen Stock Exchange ( koodhka kaydka: 300220 )
Si rasmi ah ugu lug leh aagga goynta leysarka fiber-ka ee biraha, shirkadda hoosaad Wuhan Vtop Fiber Laser Engineering Co., Ltd ayaa la aasaasay.
CO2 laser lasers biraha oo ay soo saartay LASER GOLDEN ayaa la bilaabay.
Nidaamka xardho laser-ka otomatiga ah ee Galvo ee qalabka duubista ayaa la bilaabay.
LASERKA DAHABKA ah ee ugu horreeya 3.2 mitir super-ballaaran CO2 mashiinka goynta laser ayaa la geeyay. The awoodda ahaanayta of HORREEYA laser oo format weyn flatbed laser CO2 jarida Machine waxaa si fiican u yaqaan in industry ee.
Gelida warshadaha dharka warshadaha. Markii ugu horreysay ee lagaqeybgalo bandhigga warshadaha kala-shaandheynta, ayaa lagu guuleystay ammaan loo dhan yahay.
Mashiinka daabacaadda biriijka ee 'laser laser' ayaa la bilaabay, isagoo ku guuleystay isku-darka ugu fiican ee daabacaadda kumbuyuutarka iyo goynta laser
3D firfircoon oo diiradda saaraya qaabka xardho laser-ka galvanometer-ka weyn.
Habka patent-ka gudaha ee nolosha ugu dheer, midka ugu waxqabadka sarreeya iyo heerka ugu hooseeya ee guuldarada, "laba-gees" JGSH taxanaha CO2 laser cutter, ayaa markii ugu horreysay la bilaabay.
Mashiinka goynta leysarka oo qaab weyn leh oo leh miiska shaqada lagu gudbiyo ayaa la galiyay wax soo saar, taas oo calaamadeynaysa suurtagalnimada soosaar otomaatig ah oo mashiinka laser gooya.
Khadadka soosaarka taxanaha laser-ka galvanometer-ka ayaa si rasmi ah loo aasaasay.
Si guul leh ayaa loo soo saaray nidaamka tamarta leysarka sumadda laser-ka HOOSE.
Mashiinka ugu horeeya ee dharka dharka laser-ka lagu gooyo ee Shiinaha ayaa waxaa si guul leh u soo saaray shirkadda GOLDEN LASER, suuqyada gudaha iyo dibaddana waxay ka heleen ammaan aad u sareysa.
Ku Saabsan LASERKA DAHABKA